I-Bowderdale Foot: yindlu entle yasefama, ilala i-10
Bowderdale Beck, England, United Kingdom
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAshley
IBowderdale Foot yindlu yasefama ehlaziyiweyo esekwe kuxolo olumangalisayo kunye nobuhle beHowgill Fells, Cumbria. Ifakwe kwindawo esemantla yeYorkshire Dales National Park, kukho ukufikelela kwiindawo ezingqongileyo kunye namaphandle ukusuka emnyango. Yindawo entle yokutyelela iYorkshire Dales kunye neLake District parks. Indawo emangalisayo kunye nekhethekileyo yabahlobo okanye usapho lokuhlangana kunye kwiholide yempelaveki, ikhefu elifutshane okanye iholide elide.
Le ndlu yasefama echulumancisayo yaqala ngenkulungwane ye-17. Igcwele umlinganiswa, iimpawu zoqobo kunye nesetingi emangalisayo emazantsi e-Howgill Fells entle, iBowderdale Foot yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlangana kosapho kunye nabahlobo, impelaveki yombhiyozo okanye iholide.
Ikhitshi eyonwabisayo yendlu yakudala yasefama: Imiqadi ye-oki eveziweyo kunye neejoists, imiphezulu yomsebenzi wegranite kunye neLPG Rayburn. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji enkulu / isikhenkcezisi, umatshini wokuhlamba izitya, umpheki wombane, imicrowave nayo yonke into oyifunayo ukuyiphekela usapho luphela.
ILounge: Igumbi elihle elinesofa ezintle kunye nembono ngaphezulu kwegadi ebiyelwe ngodonga ngaphambili kunye nepaddock ngasemva. Intle kwaye ithambile ngokufudumeza ngaphantsi kunye nesitovu samaplanga esibaswayo.
I-TV efakwe eludongeni kunye neFreesat.
Igumbi lokutyela : Itafile ye-oki kunye nezitulo zokuhlala 10. Imiqadi ye-oki, umgangatho ophantsi welitye elifudumeleyo elineflegi kunye neziko elibonakalayo zenza indawo enkulu yesidlo sokubhiyozelwa.
Kukho amagumbi okulala ayi-5:
Igumbi elihle lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, indawo yokuhlala, umgangatho we-oki, umbono ophambi kwegadi ebiyelwe ngodonga, umlambo okufutshane kunye ne-paddock yangasemva, umnyango wegadi.
Igumbi lokulala eli-2 ligcwele umlinganiswa onebhedi enkulu, indawo yokuhlala kunye ne-nook enomtsalane ngaphezulu kweveranda engaphambili.
Igumbi lokulala le-3 linebhedi ephindwe kabini, imiqadi ye-oki kunye nenqanaba lokuhla ukuya kwindawo encinci yokunxiba enesifuba sedrowa kunye nendawo yokuxhoma.
Igumbi lokulala eli-4 ligumbi elinamawele elinembono ngaphezulu kwegadi ebiyelwe ngodonga.
Igumbi lokulala eli-5 lineebhedi ezimbini zomntu omnye. Eli lelona gumbi lincinci, lilungele abantwana kodwa lifanelekile nakubantu abadala
Kukho igumbi lokuhlambela elikumgangatho wokuqala elinebhafu, ishawari eyahlukileyo, iyunithi engamampunge, iWC, isiporo sethawula eshushu kunye neradiyetha.
Igumbi lokuhlambela elisezantsi, iWC kunye nesitya sokuhlambela izandla.
Indawo esetyenziswayo enomatshini wokuhlamba, isomisi kunye netop / isinki.
Iveranda yangasemva/igumbi leboot elinendawo yokuxhoma ibhatyi.
Zonke ilinen kunye neetawuli zibonelelwe.
Indawo yokupaka: Ininzi indawo yokupaka phambi kwendlu.
I-Wi-Fi: Ipropathi ine-Wi-Fi, ilungile kodwa ayikhawulezi kakhulu.
Ukugqunywa kwefowuni ephathwayo kulinganiselwe kakhulu ngaphakathi ngenxa yeendonga ezishinyeneyo zendlu, kwaye zinokuba neziziba ngaphandle ngokuxhomekeke kuthungelwano lwakho.
Njengoko le ndlu ingamakhulu eminyaka ubudala, inemigangatho engalinganiyo, eminye imiqadi ephantsi kunye neengcango, kunye nezinyuko ezimxinwa.
IBowderdale Foot ikwindawo esemantla eYorkshire Dales National Park. Kukho ukufikelela kwii-Howgill Fell kunye namaphandle ajikelezileyo ukusuka emnyango, kunye neevenkile ezikufutshane (eKirkby Stephen) kunye nee-pubs (Ravenstonedale) malunga nemizuzu eli-10 yokuhamba. Ikwayindawo entle yokutyelela iYorkshire Dales kunye neLake District Parks yeSizwe, kunye neHawes kunye neWindermere malunga nemizuzu engama-40 kude.
Iindwendwe zizijonga xa zifika, isitshixo sikwisefu yesitshixo ecaleni komnyango wangaphambili.
Sihlala malunga nemizuzu engama-45 kude, kwaye zihlala zifumaneka ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho ukuba uneengxaki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bowderdale Beck